“Mooraa Qabsoo Oromoo Humneessuuf, Mooraa Diinaa Hongeessuu Qabna.” – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Mooraa Qabsoo Oromoo Humneessuuf, Mooraa Diinaa Hongeessuu Qabna.”
“Mooraa Qabsoo Oromoo Humneessuuf, Mooraa Diinaa Hongeessuu Qabna.”
Qabsaa’aan akeeka qabsoo Oromoo hubate, maaliif akka qabsaa’u bareechee beeka. Qabsaa’onni kaayyoo fi galma qabsoo Oromoo hubatan kanneen mooraa diinaa keessatti tooftaa fi ogummaa baratanii roorroo ummata isaanii irra ga’uuf wareegama kaffalan muraasa miti. Bara bulchiinsa sirna moototaa, gootota mooraa diinaa cabsanii ba’uun roorroo fi garbummaa saba isaanii jecha aarsaa lubbuu Oromoof kaffalan keessaa J. Taaddasaa Biruu fi Dhibbaalaa Maammoo Mazammir fakkeenya guddaadha.
Dhaloonni qubee madaa seenaa dubbisaa fi haqa saba isaaf madaa’aa guddate faana angafoota qabsoo qabatee imaluu irratti fuulleffateera. Qabsaa’aan wareegamus kaayyoo fi qabsoon akka itti fufu dhaloonni qubee qabatamaatti agarsaa jira.
Goonni asii gaditti argamu kun qabsaa’aa Jaal #Gurmuu_Lachiisaa jedhama. Mana barumsaa sadarkaa 1ffaa irraa jalqabee hanga yuuniversiitiitti barataa cimaa qabxii olaanaa galmeessaa turedha. Yuuniversiitii Finfinneetti barataa saayinsii siyaasaati. Akkasumas perezedaantii GAAO ta’uun tajaajilaa tureera. Bara 2014 yeroo qabsoo Maaster Pilaanii waggaa tokkoof yuuniversiitii irraa erga hari’ameen booda bara 2015 barnoota isaa itti deebi’uun digirii jalqabaan eebbifame.
Akkuma barnoota isaa xumureen leenjii loltummaa fudhachuuf mooraa leenjii Sandaafaa Yuunivarsiitii polisii Itoophiyaa Sandaafaatti argamutti barnoota polisii/waraana fi qondaalummaa fudhachuun gulantaa Gargaaraa Inspektara/Gargaaraa Ajajaa 100tiin waggaa lama barachuun eebbifame. Namoota leenjii waliin fudhate keessaa 1ffaa ba’uudhaan perezedaantii Saalawarq Zawudee irraa badhaasa Warqii fudhateera.
Qabxii olaanaa waan fideef yuunivesiitiicha keessatti hafuun barsiisummaa irratti ramadame. Ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeensaa booda bakka hojii isaatii ukkaamsuun mana hidhaatti darbatamee baatiiwwaan muraasaaf dararamaa tureera.
Akkuma mana hidhaa keessaa baheen mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootti makamuun diina qabsoo Oromootiin loluu irratti argama. Qabsaa’aan kun nama tooftaa qabsoo tolchee beekuufi beekumsa ga’aa itti qabudha. Yeroo baay’ee roorroon saba isaa irratti dabaree wal furu boqonnaa fi hirriba isaaf hin kennu. Nama saayinsii qabatamatti hojiitti hiikuu danda’udha.
Jaal Gurmuu Lachiisaa har’a loltuu Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)ti. “Mooraa qabsoo Oromoo humneesuuf, mooraa diinaa hongeessuu qabna” jechuun dhaadannoo isaa yeroo maraati. Badhaafamaan saayinsii siyaasaa fi saayinsii waraanaa Jaal Gurmuu Lachiisaa har’a mooraa diinaa keessaa cabsee ba’uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamee diinaan wal loluu irratti argama.
Ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessatti qawwee baattanii jirtan, goota kana fakkeenyummaa godhachuun mooraa qabsoo saba keessaniitti makamuun roorroo fi garbummaa saba keessan irra ga’aa jiruuf wabii akka taatan waamicha Oromummaa siniif dhaamna.
News July 4: Abebech Gobena -TPLF’s 7 conditions for ceasefire